बी.पी. र पुष्पलालको देवत्वकरणः मनोवैज्ञानिक समस्याको उपज - हिमाल दैनिक
बी.पी. र पुष्पलालको देवत्वकरणः मनोवैज्ञानिक समस्याको उपज
(बी.पी. र पुष्पलालको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा तयार पारिएको आलेखः भाग २)
१६ श्रावण २०७६, बिहीबार १९:१४
राजनीतिक पार्टीहरुको एउटा सामान्य विशेषता हुन्छ। प्रत्येक पार्टीले आफूँसँग युगबोध भएको दाबी गर्दछन्।
उनीहरुसँग एउटा विचारधारा हुन्छ। मूलतः उनीहरु सत्ताका निमित्त प्रयत्नशील एवं संघर्षशील रहन्छन्। तर, कुनै पनि पार्टीले मैले सत्ताका निमित्त सत्ता खोजेको भन्दैन। प्रत्येक पार्टीको दाबा हुन्छः यस समाजलाई, राष्ट्रलाई केही परिवर्तनको खाँचो छ र त्यो परिवर्तन गर्ने बाटो हामीसँग छ।
त्यो हाम्रो बाटोका निमित्त हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई सत्तामा पुर्याउनुहोस्। तब हामीले भनेजस्तै, हामीले बुझेजस्तै र बुझाएजस्तै समाजलाई बदल्छौँ।
केही गम्भीर पार्टीहरु त अझ अगाडि बढ्छन्। उनीहरुलाई युगवोध भन्ने शब्दले पुग्दैन, विचारधारा भन्ने धारणाले पनि पुग्दैन र आफूँसँग ‘वाद’ भएको दाबी गर्दछन्।
त्यही सिलसिलामा अनेकौँ वादहरुको नामाकरण भएको छ। नयाँ वादहरुको श्रृजना भएको छ। सिंगो २०औं शताब्दीमा साम्यवाद, पूँजीवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, फाँसीवाद, नासीवाद जस्ता वादहरु चलिरहे।
अहिले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरु छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपालमा साम्यवाद–समाजवाद स्थापित गर्न चाहन्छ।
नेपाली कांग्रेस साम्यवादको कुरै गर्दैन तर, उ पनि समाजवाद भने चाहन्छ। उसले आफ्नो समाजवादमा प्रजातान्त्रिक भन्ने विशेषण लगाएको छ। त्यसैले कांग्रेसको वादको नाम छः प्रजातान्त्रिक समाजवाद। नेकपाको वादको नाम छः साम्यवाद–समाजवाद।
बी.पी. कोइरालालाई सम्झिँदा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादका आदिगुरुका रुपमा लिन्छ। कमसेकम नेपालका निमित्त उनी समाजवादका राष्ट्रिय प्रवर्तक हुन्। पुष्पलाल त कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता भए।
यी दुई नेताको सेरोफेरोमा दुबैको पार्टीले आफ्नो वर्तमान विचारधारा, दूरदृष्टि, युगबोध संचारित भएको दाबा गर्छन्। बेलाबखतमा परिमार्जन पनि हुन्छ। त्यो परिमार्जन सबै इन्कार छैन तर, वाद भने रहेकै हुन्छ।
पुष्पलालले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कार्यनीतिका रुपमा संयुक्त जनआन्दोलनलाई महत्व दिनु भएको थियो। उहाँको राजनीतिक लक्ष्य भने नयाँ जनवाद अर्थात न्यू डेमोक्रेसी थियो। मदन भण्डारीले पछि नयाँ जनवादको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको संज्ञा दिए।
माओवादीहरु त्यहाँ पनि रोकिएनन्। उनीहरु २१औँ शताब्दीको जनवादको नयाँ प्रस्तावना अघि सारे। अझ बिचमा त माओवादीहरुले ‘प्रचण्डपथ’ भन्ने कतै नसुनिएको र कतै नबुझिएको सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए।
बी.पी. र पुष्पलालको असली व्यक्तित्व र सुगा रटान
बी.पी. कोइरालाका हकमा उहाँले पहिलो चरणमा लोकतान्त्रिक समाजवादी कुरा गर्नु भयो। दोस्रो चरणमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई हाँसिल गर्नका निमित्त राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भयो।
नेपाली कांग्रेसले बी.पी.को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई एउटा प्रस्तावका रुपमा लिएन। अत्यन्त उदारतापूर्वक राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव बढीमा एउटा कार्यनीति थियो। तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई कार्यनीतिका रुपमा पनि लिएन र यो त मानौँ एउटा नयाँ सिद्धान्त हो, नयाँ विचारधारा हो, नयाँ वाद पो हो कि जस्तोगरी यसबारे तर्कवितर्क गर्न थालियो।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रचण्डपथका बारेमा आज त पत्याउन पनि गाह्रो छ, प्रचण्डपथका सेरोफेरोमा एक होइन अनेकन नामोद कम्युनिष्टहरुले लेख लेखेका थिए। ‘प्रचण्डपथका आधारहरु’ भनेर एउटा सानो करिब डेढ, दुईसय पृष्ठको पुस्तक छापिएको थियो। त्यसमा मलाई सम्झना भएसम्म कमरेड मोहन बैद्यले प्रचण्डपथको दार्शनिक पक्ष भन्ने एउटा लेख छापिएको थियो। मोहन बैद्य निश्चित रुपले तत्कालिन नेकपा माओवादीमध्ये अपेक्षाकृत विद्धान र अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्ता व्यक्तिले पनि प्रचण्डपथको दार्शनिक पक्ष लेख्ने बाध्यता के थियो बुझ्न सकिन्न्। तर, आज त प्रचण्डपथ पनि रहेन र मोहन बैद्य पनि प्रचण्डको भाष्यकार रहनु भएन। यी उदाहरणहरुले पनि तपाई हामीलाई बी.पी. र पुष्पलालका बारेमा बोल्न र विचार गर्न प्रेरित गर्दछ।
बी.पी.को वैचारिक फड्कोहरुमा एक समय उहाँ नेपाललाई राजाविहिन नेपालको कल्पना गर्नु हुन्थ्यो। संविधान सभा उहाँको न्यूनतम सर्त थियो। उहाँले एक होइन, अनेकौँ पटक लेख्नु भएको थियोः संविधान सभाले यदि राजालाई विदा गर्छ भने राजाले सहर्ष विदा हुन स्वीकार्नु पर्दछ।
सात सालको लगत्तैपछि संविधान सभाका विषयमा उहाँका अनेकन लेखहरु छापिएका थिए। त्यी हरेक लेखहरुमा यस कुराको पुनरावृत्ती थियो। संविधान सभा ठूलो हो, जनताको ईच्छाको प्रतिविम्व हो। जनताको ईच्छा विपरित राजा राजा भइरहन मिल्दैन।
पछि वनारस प्रवासका बेलामा पनि उहाँले यो कुरा दोहोर्याउनु भयो। उहाँको ‘राजतन्त्र’ भन्ने लेखको निश्कर्षका रुपमा संविधान सभालाई प्रस्ताव ठोस रुपमा अगाडि सारिएको छ। तर, पछि एकाएक उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको धारणा बनाउनु भयो। असली बी.पी. को हो त? सात सालको क्रान्तिका नेता, संविधान सभाको प्रस्तावक अथवा राष्ट्रिय मेलमिलापका व्याख्याकार?
ठीक त्यस्तै पुष्पलाल पनि को हो त? कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासका क्रममा सबैबाट त्यागिएका, सबैबाट छुट्टिएका एकांकी कम्युनिष्ट नेता, द्धितीय महाधिवेशनमा गणतन्त्रका प्रस्तावक तर, अल्पमतमा परेर महासचिव हुन नपाएका नेता, तेस्रो महाधिवेशनका महासचिव, कांग्रेसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने नेता? के हो?
अहिले यी विचारको सेरोफेरोमा जाने काम छैन। विचारहरु तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिले बाध्य गरेर बनाइएका कार्यक्रम हुन्छन्। साँच्चिनै भन्ने हो भने विचार मात्र होइन व्यक्ति पनि त्यति महत्वपूर्ण कुरा होइन। व्यक्तिका सोचाई, मान्यता, चिन्तन, प्रस्ताव उसले अगाडि सारेको कार्यक्रममा उसका व्यक्तित्वगत वाध्यता पनि सम्मिलित हुन्छन्।
सामान्यतयः मानिस महत्वाकांक्षी भएर राजनीतिमा लाग्दछ। केही व्यक्ति व्यग्लै हुन्छन्। गान्धी बेग्लै थिए। गान्धी भन्थेः सत्ताका लागि लागेका होइनन् म त आत्मज्ञानका लागि लागेको हो। उनी भन्थेः म त सत्यको साक्षतकारका लागि लागेको हो। उनी भन्थेः म त इश्वरलाई भेट गर्न चाहन्छु। बोलीबचनका हिसाबले किसुनजी यहि भन्नु हुन्थ्यो। कदाचित किसुनजीमा गान्धीको तत्व अलिकति थियो, होइन भने सबै राजनीतिज्ञ आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको परमपावन आदर्शका निमित्त सत्ता चाहिरहेको हुन्छ।
बी.पी.ले आफ्नो जीवनमा यो कुरा लुकाउनु भएको थिएन। बी.पी.ले बारम्बार भन्नु हुन्थ्योः राजनीतिज्ञले के चाहन्छ? सत्ता त चाहन्छ नि। यसमा उहाँलाई कुनै पनि संशय थिएन।
पुष्पलालजी पनि आफ्नो कुरा भन्नु हुन्थ्यो। कम्युनिष्ट पार्टीलाई नेपालमा सफल बनाउनु परेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवाद ल्याउनु छ। त्यसका लागि फलानो, चिलानो शक्तिसँग मिल्नु पर्छ, इत्यादि।
यसै कुरामा आफ्ना धारणा भन्न चाहन्छु। एउटा हुन्छ व्यक्ति, अर्को हुन्छ विचारधारा। यी व्यक्ति र विचारधारा तर, एउटा कालखण्ड विशेषमा उब्जिएका हुन्छन्। बी.पी. र पुष्पलाललाई एउटा युग विशेषको सन्दर्भ र दायरामा मात्र बुझ्न सकिन्छ।
यदि पुष्पलाल एकसय वर्षअघि जन्मिएको भए उहाँले लेनिनको नाम सुन्नुहुने थिएन। बी.पी एकसय वर्षअघि जन्मिनु भएको भए उहाँले पनि गान्धीलाई चिन्नु हुने थिएन। एक सय किन पचासै भनेपनि हुन्छ। उहाँहरु दुबैको विचारधारा हामीले हेर्यौँ भने, लेनिन, माक्र्स, गान्धीको गम्भीर प्रभाव भेटिन्छ। सायद आफ्नै कुरा भन्नु हुन्थ्यो होला तर, अर्कै भाषामा भन्नु हुन्थ्यो होला।
एउटा जमाना थियो जहाँ विश्वका सबै सामाजिक र आर्थिक संघर्ष धर्मको भाषामा व्यक्त गरिन्थ्यो। हीनयान र महायानको झगडा, क्याथोलिक र प्रोटेष्टेण्टको झगडा, इस्लाम र हिन्दुको झगडा, इस्लाम र क्रिस्चियनको झगडा, इस्लाममा पनि सिया र सुन्नीको झगडालाई तत्कालिन सामाजिक सन्दर्भलाई बिर्सिएर बुझ्नै सकिँदैन।
प्रमुख झगडाकर्ता को हुन्थे? त्यसको नेतृत्व कसले गर्दथ्यो? स्वयं मोहम्मद के थिए? सिया र सुन्नीबीचको झगडामा नातीहरु जो लडे–मरे उनी को थिए? अथवा उनका विरुद्धमा लड्ने एजिद को थिए? त्यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने, महान आन्दोलन श्रृजना गर्ने व्यक्तिहरु पनि समयको बोली बोल्छन्। एउटा विशेषता हुन्छ।
उनीहरुको व्यक्तित्वले देश र कालको अतिक्रमण गरेको हुन्छ। देश र कालको सिलसिलामा पुष्पलालले नौलो जनवाद भन्नु हुन्छ। बी.पी.ले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नु हुन्छ। त्यो कुनै जमानामा कुनै बौद्धे आफूलाई बज्रयानी भने जस्तै अथवा हीनयानी भनेजस्तै त्यसको अगाडि न हीनयान सत्य हुन्छ न बज्रयान वा महायान सत्य हुन्छ। सत्य त मनुष्य हुन्छ। उसको मानवता हुन्छ। उसको शक्ति र सामथ्र्यको हुन्छ। मनुष्यको कमी कमजोरीको हुन्छ।
त्यसैले हामीले बी.पी. कोइराला र पुष्पलालको योगदान र अवधारणा हेर्दा उनीहरुको विचारधारालाई तात्कालिक रुपमा उनीहरुको व्यक्तित्वलाई हेर्नु पर्छ। त्यो पनि उनीहरुको जीवनकालसँगै सिद्धियो। उनीहरुको इश्र्या, क्रोध, झैझगडा उनीहरुको जीवनकालसँगै सकियो।
पुष्पलालले मनमोहन, मोहनविक्रम, तुलसीलाल, रायमाझी सबैसँग झगडा गरे। मनपरी झगडा गरे र भन्नु नभन्नु भने। त्यतिबेला बरु कांग्रेसलाई आक्रमण गर्न भ्याएनन्। तर, त्यो उनीहरुको मृत्युसँगै सकियो। त्यसैले नै हामीकहाँ बडो राम्रो परम्परा छ, मृत्युपछि उसका नराम्रा कुराहरु सम्झिँदैनौँ।
तर, उनीहरुको विचारधारा भन्दा ठूलो कुरा उनको व्यक्तित्व थियो जसले देश र काललाई पनि अतिक्रमण गरेका कुरा पनि कतिपय थिए।
अब विचारधाराको हकमा बी.पी.को विचारधारा केलाई मान्ने त? सात सालको विचारधारालाई मान्ने? अथवा सात सालदेखि १५ सालसम्मको विचारधारालाई मान्ने? संविधान सभाले पारित गर्छ भने राजाले सहर्ष स्वीकार्दै गद्दी छोड्नु पर्छ भन्ने बी.पी.को विचारधारा हो कि? अब प्रधानमन्त्रीका रुपमा बी.पी.ले नेपालमा राजा महेन्द्रभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी कोही छैन भनि नुवाकोटमा भाषण पनि गर्नु भएको छ, अथवा फेरि वनारसमा नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णयलाई मान्ने कि? अथवा भारतमा बस्दाबस्दै अर्न्तज्ञान भएर नेपाल फर्किएर राजासँग मेलमिलाप गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मान्ने? यी सबै तात्कालिक कुराहरु हुन्। यी व्यक्तिगत कुराहरु हुन्।
हामीले राजनीतिमा के विर्सनु हुँदैन भने, तत्कालिन परिस्थितिमा जुन दिन जे परिआउँछ त्यहि बोलिन्छ। चुनाव लडेको नेताले बोलेका कुरालाई उसको विचारधारा यहि हो भन्न मिल्दैन। चुनाव लडेका बेलामा बेग्लै हुन्छ।
तर, यसको मुख्य विशेषता के हुन्छ भने, विचारधारा भन्दा पनि आफ्नोे व्यक्तित्व भन्दा माथि अथवा आफ्नो आदतभन्दा पनि माथि जुन व्यक्तिले आफ्नो आदत्, चरित्रभन्दा माथि नै केही कुरा भनिराखेको छ वा गरिराखेको छ र बाँचिराखेको छ त्यसको सारतत्वलाई पकड्दा हामी बी.पी. र पुष्पलालको आजको सान्दर्भिकता बुझ्न सक्दछौँ।
सामान्यतयः राजनीतिक संघर्षमा विचारधाराको कुरा उठ्छ। यहि विचारधाराको कुरा उठ्ने सिलसिलामा चौथो महाधिवेशनले पुष्पलालाई ‘गद्दार’ भन्यो। चौथो महाधिवेशनका मुख्य नेता मोहनविक्रम र निर्मल लामाले पछि गएर स्पष्ट भनेः हामीले त्यो भाषाको प्रयोग गर्नु ठिक थिएन।
निर्मल लामाले त्यतिमात्र भनेनन्। उनले त लेख नै लेखे पुष्पलालको स्मृतिमा। ‘म आफूले गरेको पापको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु भन्ने शीर्षकमा नै त्यो लेखेका छन्। मैले पुष्पलाललाई गद्दार भने, त्यो एउटा पाप थियो।’
ठीक त्यस्तै कुरा पुष्पलालको मनमा पनि थियो होला। तुलसीलाल, मनमोहनकाबारेमा पनि थियो होला। कदाचित कांग्रेसकाबारेमा पनि थियो होला । पुष्पलालका लेखहरु पढेर उहिल्यै बी.पी., सुवर्णशम्शेरकाबारेमा अनेक ठाउँमा आवश्यक/अनावश्यक कटाक्ष गरेको पाइन्छ।
उनले के बोले त्यो महत्वपूर्ण कुरा छैन। उनले के लेखे त्यो महत्वपूर्ण छ तर, त्यहि पनि त्यति महत्वपूर्ण नहुन सक्छ। महत्वपूर्ण यो छ कि उनीहरुले कस्तो जीवन बाँचे।
हामीमा यस्ता मनुष्यहरुको देवत्वकरण गर्ने चलन छ। पुष्पलालको देवत्वकरण गरिन्छ। बी.पी.को पनि देवत्वकरण भएको छ। कार्यकर्ताले त्यसो गर्नु उसको एउटा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता देखिन्छ। मानिस आफ्नो सीमा, आफ्नो कमजोरी र आफ्नो छुद्रतालाई बिर्सन चाहन्छ। त्यसक्रममा मानिसले आफूलाई ठूलो मानिससँग एकाकार गर्ने कोशिश गर्दछ।
कुनै जमानामा भक्तहरु आफूलार्ई शिवभक्त, देवीभक्त, कृष्णभक्त भन्थे। आधुनिक जमानामा कार्यकर्ताहरु बी.पी.को मान्छे, किसुनजीको मान्छे अथवा ओशोको मान्छे अथवा रविशंकरको मान्छे भनेर गर्व गर्छन्। यो मनुष्यको मनोवैज्ञानिक समस्या हो।
एकजना प्रसिद्ध र सच्चा वामपन्थी कवि थिए वर्टोल्ट ब्रेख्तले ग्यालिलियोको जीवनी (Life of Galileo) भन्ने प्रसिद्ध गीतिनाटकमा लेखेको छन्ः अभागी हो त्यो देश जसलाई नायक चाहिन्छ। (Unhappy the land where heroes are needed) अभागी हो त्यो समाज जसलाई नायक चाहिन्छ।
तैपनि हामीलाई महापुरुष चाहिन्छ। हामीलाई महानायक चाहिन्छ। कुनै जमानामा मानिसलाई ईश्वर चाहिन्थ्यो। मानिसले ईश्वरको आविष्कार गरे। मानिसले नै ईश्वरलाई जन्म दिएको हो। आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो कमजोरी, भय, त्रास, आँधी, तुफान, बाढी, मृत्युको डरबाट मान्छे डराएर इश्वरको कल्पना गरेको हो। यहीँ हामी बाढी पीडित छौँ अहिले। केही महिनाअघि वारा र पर्सामा भयंकर ठूलो बबन्डरले हामीलाई निःसाय बनाएपछि हामी करायौँ र भन्यौँ: हे ईश्वर, रक्षा गर, बचाउ। ईश्वरप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ। त्यसको ठाउँमा हामीले महापुरुषहरुः बी.पी. कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन, गणेशमान, भट्टराई बनाउँदै जान्छौँ।
यसको मतलब उनीहरुको अवमूल्यन होइन। तर, उनीहरुकोबारेमा हामीले एउटा वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा यो सम्झिनु आवश्यक छ कि उनीहरु पनि मानिस थिए। त्यसैले उनीहरुलाई प्रत्येक मानिस जस्तै रिस, राग, डर, त्रास, सहास, सत्य, धैर्य, दया हुन्छ।
यो हरेक मनुष्यको जीवनमा एकसाथ सद्गुण र दुर्गुण दुबै हुन्छन्। जुन कुरा तुलसीदासले आफ्नो ‘रामचरितमानस’मा लेखका छन्ः ‘सुमति कुमति सब के उर रहहीं’ …।
उनीहरुको आफ्नो–आफ्नो जीवन थियो। कतिका पत्नी थिए कतिका थिएनन् । कतिका पत्नीको परपुरुषसँग सम्बन्ध थियो होला त कतिको परस्त्रीसँग सम्बन्ध थियो होला। कतिका ज्यादै रिस राख्ने, कसैमा पैसाप्रति अलि कमजोरी थियो भने कसैमा पदप्रति कमजोरी थियो होला। यी सबै व्यक्तिमा थियो जुन हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन।
सँगसँगै यस्ता कुनै पनि कमजोरीले उनीहरुलाई बाँध्न सकेकोे थिएन। उनीहरु त्यी कमजोरीका उपर विजय प्राप्त गर्न सक्ने थिए। बी.पी. कोइरालालको नेपाल प्रत्यागमन आफ्ना त्यस्तै कमजोरीमाथिको विजय प्राप्ति थियो।
उहाँ वनारसमा अलि अलमलिएर बस्नु भएको थियो। एक दिन वनारस छोडेर नेपाल आउँदा आफ्नो इज्जतलाई हत्केलामा राखेर ज्यानको बाजी थापेर आउनु भएको थियो। सबैले उहाँलाई साथ दिए, परिस्थितिले पनि साथ दियो। उहाँ लोकप्रिय हुनु भयो र देहावसानपछि पनि एक लाख भन्दा बढी मलामी लिएर जानु भयो।
त्यो विशेषता पुष्पलालमा पनि थियो । पुष्पलालको विशेषता मैले आफ्नै आँखाले देखेको पनि थिएँ।
कस्तै नराम्रो परिस्थितिमा पनि भेट्ना साथ हाँस्दै बस्नुहोस् बस्नुहोस् भन्नु हुन्थ्यो। उहाँसँग मैले वनारसमा बस्दा साँझका समयमा घण्टौँ बसेर कुरा गरेको छु। उहाँन्ले कहिल्यै पनि कांग्रेसबाट कम्युनिष्ट बनाउने कोशिश गर्नु भएन। उहाँले सधैँ भन्नु भयोः तपाई कांग्रेसमा पनि अलि र्‍याडिकल र अग्रगामी हुनुहुन्छ। हामीले मोर्चा बनाउनु पर्‍यो।
उहाँले यसरी मोर्चा बनाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय आयामको कुरा गरेर हेर्नुहोस् न रुसले अफगानिस्तानमाथि, भेयतनामले कम्फुचियामाथि आक्रमण गर्यो भन्दै त्यसविरुद्ध मोर्चा बनाउने कुरा गर्नु हुन्थ्यो। प्रजातन्त्रका लागि लड्नु थियो भने उहाँ सामन्तवाद र दलाल पूँजीवादका विरुद्धमा लड्नु छ भन्नु हुन्थ्यो। आज पनि उहाँका त्यी शब्द मेरो मानसपटलमा ताजै छन्।
तात्कालिक सिद्धान्तका आधारमा एउटा राजनीतिक पार्टी बन्न सक्छ। साधारण नारा अथवा गोलमोटोल प्रस्तुतीका आधारमा चुनाव जित्न सकिन्छ। बिगतको आम चुनावमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको ठूलो विकुल फूके। त्यस विकुलले उनलाई लाभ भयो। नेकपालाई चुनाव जित्न सजिलो गरायो। तर, ओली र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा स्थिर सरकारको कुरा गरेको अथवा राष्ट्रियताको विगुल फूकेको कुराको यथार्थ अहिले स्पष्ट हुँदैछ। त्यसका आधारमा यी दुवै महानुभावको व्यक्तित्वलाई हेर्न सकिंदैन्।
ठिक त्यस्तै बी.पी.को महानता उहाँका तात्कालिक सिद्धान्तमा छैन्। पुष्पलालको अवदान उनले लेखेका सानातिना पुस्तिकामा पनि छैनन्। यी दुवैले आफ्ना जीवनलाई एउटा आदर्श उदाहरणको रुपमा पेश गरेका छन्। त्यस्ता आदर्शका उदाहरणले साँच्चो अर्थमा समाजवादी सभ्यताको जग बसाएको छ। समाजवादको इतिहासमा बारम्बार भनिएको छ कुनै राजनीतिक विचारधारा मात्र होइन्, यो कुनै आर्थिक सिद्धान्त मात्र होइन्। यो मुख्यतः एउटा नयाँ सभ्यताको परिकल्पना हो। र, बी.पी. साहित्य, कला र धर्म सबैलाई समाविष्ट गरेर नेपालमा एउटा नयाँ सभ्यताको जग राख्न चाहानु हुन्थ्यो। उहाँ धेरै हदसम्म त्यहाँ सफल पनि हुनुभयो। एकै दिनमा मानिस लक्ष्यमा पुग्दैन्। कुनै पनि मानिसले आफूलाई एक दिनमा लक्ष्यमा पुर्‍याउँन सक्दैन्। महान् नेताले त लक्ष्य औल्याउँने हो, बाटो देखाउने हो। आफ्नो व्यक्तित्व र जीवनबाट आगामी पुस्तालाई प्रेरणा दिने हो। यो काम वीपी र पुष्पलाल दुवैले गरेका थिए।
बी.पी.को देहावसानको समय म समेत सम्बद्ध भएको समता भन्ने पत्रिका छापिन्थ्यो। पछि मानव अधिकार आयोगका सदस्य हुनु भएका सुदिप पाठक त्यसका संस्थापक सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। समताको बी.पी. अंकमा मैले श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा मैले एउटा उर्दू शेरको उद्धरण गरेको थिए। त्यो शेर यस प्रकार थियो —
रहवर राह मुसाफिरको दिखा देता है
मंजिल पर ही पहुँचाए जरुरी तो नही।
बी.पी. र पुष्पलाल दुवैको जीवन र अवदानलाई अध्यन गर्दा उपर्युक्त शेर दुबैको व्यक्तित्वमा आज पनि सम्झनु पर्ने लायक छ। यो सम्झना नै उहाँहरुको प्रति साँच्चो श्रद्धाञ्जली र तुलना हुनेछ।
Prevपछिल्लोमंसिरमै उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सुझाव
अघिल्लोसाउनभित्र पार्टी एकता टुङ्गिन्छNext